Love – BaHuTuTa
အချစ်စစ်နှင့် ချစ်မိသွားသည့်အခါ အများအမြင်မှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ဘယ်လိုအနေထား ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါစေ အချစ်က တည်မြဲခိုင်မာနေမှာပါ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည် ဂုဏ်ငွေ ပကာသနများကို မမက်မောပဲ အချစ်စစ်တစ်ခုတည်းနှင့် နှလုံးသားချင်း ပေါင်းစပ်ခဲ့သည့် အားကျ ကြည်နူးစရာ စုံတွဲလေးအဖြစ်ရှိနေသည်။ ထိုဇနီးမောင်နှံကို အများမှ အရပ်အမောင်းနှင့် ပက်သက်ပြီး ပြောဆိုဝေဖန်ခြင်းများ ရှိသော်လည်း […]
မီးဖိုချောင်အလုပ်ဆို လူတိုင်းအထင်သေးတယ်။မိဘနဲ့လင်ယောကျ်ားလိုလူတောင် ကိုယ့်ကိုမလေးစားဘူး။တချို့မိဘဆို မီးဖိုချောင်ကိစ္စတာဝန်ယူတဲ့သားသမီးနဲ့ ပိုက်ဆံပေးတဲ့ သားသမီးမှာ ပိုက်ဆံပေးတဲ့သူပဲ မိဘဆီမျက်နှာရတယ်။ ယောကျ်ားဆိုတဲ့အမျိုးလည်းမေးကြည့် အိမ်မှုကိစ္စလုပ်တဲ့မိန်းမနား သာယာလား ။KTV က စော်တွေနား သာယာသလားလို့။အိမ်မှုကိစ္စဟာ ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းအတွက် သီးသန့်လုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အိမ်ရှိလူတွေတွက် တစ်ယောက်တည်းကနေအများမလုပ်ချင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ဒိုင်ခံဆောင်ရွက်တာပဲဖြစ်တယ်။ မီးဖိုချောင်မှာ အလုပ်လုပ်လို့အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေ ရွေးမစားဘူးထမင်းအအေးနဲ့ အပူ ပေါင်းထားရင်တောင် […]
ဂျိုဝီဂျွန်ဆင်ဆိုတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ အလွန်ကြည်နူးစရာ လုပ်ရပ်ကို ကြိုးစားလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ကံမကောင်းစွာပဲ သူ့ရည်းစား မိုက်ကယ်ဂျွန်ဆင် နဲ့ တွေ့ပြီး ၄ လအကြာမှာတော့အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ ဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာ အဆိုပါ မတော်တဆမှုက သူ့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ အောက်ပိုင်း […]
Gen Z များ လိုက်မမှီနိုင်သေးတဲ့ ရာဇဝင်ထဲက အချစ်ရေး တော်ကီများ (၁) “မမြဝင်းရယ်…လှေလံနှစ်ဖက်နင်းမယ်ဆိုလည်း ကျုပ်ဘက်ကို ပိုပိုသာသာလေး ဖိနင်းလိုက်စမ်းပါဗျာ..။ (ဗိုလ်အောင်ဒင်) (၂) “မယ်သီတာရယ် မင်းပုံရိပ်ကလေး မြင်ခဲ့ ကတည်းက စွဲလမ်းခဲ့ရတာပါ..။ မင်းဘာသာ လင်ဘယ်နှယောက်ရဲ့ မယားဖြစ်နေနေ ငါဂရုမစိုက်ဘူး ။ ငါလိုချင်တာ […]
body language ပုံစံတွေက လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွင်းစိတ်နေ သဘော ထားကို ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။စုံတွဲတွေကြားက လက်ကိုင်တဲ့ ပုံစံအနေအထား အမျိုးမျိုးက အဲ့ဒီစုံတွဲကြားက ဆက်ဆံရေးကို ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ချစ် သူရဲ့ လက်ကိုဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့ ကိုင်လေ့ရှိလဲ..?အဲ့ဒီပုံစံတွေကပြောနေတဲ့ သင်တို့ကြားက ဆက်ဆံရေးကတော့…. #လက်ဖဝါးထဲကို ထည့်ပြီး ဆုပ် ကိုင်တာ ပုံမှာပြထားတဲ့ […]
ချစ်သူရှိတဲ့သူလား၊မရှိသေးတဲသူလား၊ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခါတစ်လေ ကောင်မလေးတွေ ဘာပြောချင်လဲ နားလည်ရခက် နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ သူတို့ပြောတဲ့ စကားရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ဆိုလိုချင်သလိုု တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်းမူရင် ဆိုလိုရင်းအတိုုင်းယူရတာရှိပါတယ်။ စိတ်ညစ်တယ်လို့တော့ ဆင်ခြေမပေးနဲ့ပေါ့။ သင်ကကြိုက်မိတာကို အောက်မှာတော့ ကောင်မလေးတွေ ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားဝှက်လေးတွေကို ဗဟုသုုတအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. ကျွန်မခေါင်းနည်းနည်းကိုက်နေလို့ ဒါကတော့ […]
အချစ်ရေးမှာယောျကာ်းလေးတွေကသူတို့ထက်အသက်ကြီးတဲ့မမတွေကိုမှ အသည်းအသန် ပစ်ကြွေကြတာ မြင်နေကြားနေကြရတာပါပဲ ။ အနုပညာရှင်တွေကြားမှာလည်း မောင်လေးနဲ့မမဇာတ်လမ်းတွေက လူတွေကြားမှာ ထူးထူးခြားခြား စိတ်ဝင်စားခံနေရတာ လူတိုင်းအသိပါပဲ ။ အသက်ငယ်တဲ့ကောင်လေးတွေကသူို့ထက်ကြီးတဲ့မမတွေကိုမှဘာကြောင့်ချစ်မိကြတာလဲဆိုတာအကြောင်းရင်းတွေရှိပါတယ်။အဲဒါကဘာတွေလဲဆိုတာ တချက် ကြည့်လိုက်ရအောင် ။ (၁) အသက်ကွာဟမှု အတွေ့အကြုံ ကိုယ်နဲ့အသက်တူအရွယ်တူကို ချစ်ရတာဟာ အရာရာပြိုင်ဆိုင်နေရတတ်ပါတယ် ။ ငယ်တဲ့သူကိုချစ်မိရင်ကျတော့ အလိုလိုက် […]